Intetho yobuNkokheli - SHANDONG jinta MACHINERY GROUP CO., LTD
I-Shandong JINTA Machinery Group Co., Ltd. ikwi-Feicheng (isixeko esibizwa ngokuba yiDolophu yeePesika), kwiPhondo laseShandong.Ikufuphi neNtaba iTai ngasempuma, ecaleni kweQufu, idolophu yaseConfucius, emazantsi, iLiangshan engummelwane ngasentshona kunye neSixeko saseSprings - iJinan emantla.Yindawo enandipha izibonelelo ezifanelekileyo zejografi nenkcubeko kwaye izale abantu abaninzi abadumileyo.
IQela leJinta lisiseko sokwenziwa kwemveliso yaseTshayina yeeseti ezipheleleyo zotywala, i-ethanol kunye nezixhobo zemveliso zeDDGS.Iyakwazi ukwenza inkonzo yokumisa enye (kubandakanywa ukuyila, ukuvelisa, ukufakela, kunye nokugunyazisa) kwi-100-500,000t / ngonyaka i-alcohol egcweleyo, i-ethanol, kunye neeprojekthi zeDDGS - "iiprojekthi zokuvula isitshixo. Kwiminyaka yakutshanje, iJinta Lenze iiprojekthi ezininzi zotywala ezipheleleyo kwiinkampani ezininzi ezinkulu eziquka iSichuan Wuliangye, iBozhou Gujinggong, kunye neQela leShandong Zhongxuan.Imveliso inceda amawaka abasebenzisi kwizixeko namaphondo angaphezu kwama-20. Iqela leJinta linamalungelo aziqhubayo okungenisa nokuthumela ngaphandle, kwaye Iimveliso zithengiswa kumazwe angaphezu kwamashumi amabini afana ne-Australia, iRashiya, iThailand, iMyanmar, iMongolia, i-Iran kunye ne-Bangladesh.Inconywa njenge "Pyramid" e-China.
IJinta ixhotyiswe ngezixhobo ezipheleleyo zoomatshini, kunye nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho ovakalayo.Ineziqinisekiso zelizwe zokwenza kunye nokuyila i-Class I kunye ne-Class II iinqanawa zoxinzelelo kunye nokuvelisa iinqanawa zoxinzelelo lwe-Class III.Kwiminyaka yakutshanje, Jinta ngokukhutheleyo ukwandisa imimandla imveliso, kwaye wenze iiprojekthi ezininzi imichiza kuquka amayeza, PVC, furfural, furfuryl utywala njalo njalo, apho abathengi ummeli ziquka Qilu Pharmaceutical Factory, Freda, Shandong Bohui Group, Zibo Organic Chemicals njalo njalo. kwi.UJinta ufumene iindumiso ngamxhelo mnye kubasebenzisi.
Sizimisele ukusebenzisana ngentliziyo yonke nangokunyaniseka nabahlobo abavela kuzo zonke iinkalo zobomi kunye neteknoloji yeklasi yokuqala, izixhobo zeklasi yokuqala, kunye nenkonzo yokuqala!
Usihlalo, unobhala weqela kunye nomphathi jikelele, uZhang Jisheng, ujonge phambili kubahlobo abavela kuzo zonke iinkalo zobomi basindwendwela ukufumana isikhokelo!